Ukubaleka okuNcunci okuSwiti kwi-AZ- Ngaphandle kweGridi & nezinto eziluncedo
White hills, North Nomad street, AZ, United States
Ibhokisi yomthwalo enkulu yentsimbi sinombuki zindwendwe onguTina And Troy
Ngaba uphila ubomi obuxakekileyo? Ngaba ufuna ukuqhawula unxibelelwano kwisiphithiphithi kwaye uqhagamshele kwakhona ekukhanyeni kwakho kwangaphakathi? Imizuzu engama-90 kuphela uphuma eLas Vegas, unokuba ungekho-kwigridi kwaye uzonwabisa kwi "Tiny Sweet Escape". Phefumla ngokuzolileyo, ngalo lonke elo xesha usonwabela ubuntofontofo bezinto ezisebenza ngamandla elanga. Ukuba ufuna i-adventure, indawo eninzi yokuhamba / ukuhamba. Kwimizuzu engama-20, ungaya kuMlambo iColorado uyokonwaba ngokuloba, kwaye ngemizuzu engama-30, unokuba seGrand Canyon eNtshona Rim.
I-Tiny Sweet Escape yethu imalunga nokutshaja kunye nokuphinda uqhagamshele kwisibane sakho! Oko kuthethiweyo, la mava angaphandle kwegridi akuvumela ukuba ukhulule kwitekhnoloji ukuze ungaqhagamshelwa kwi-intanethi. Ukhuseleko lweselfowuni lukhawulelwe ngokufikelela kwimayile enye. Siphinde salungisa isikhongozeli senqanawa esele sisetyenzisiwe kwaye sakha indlu encinci enencasa enencasa eyindawo egqibeleleyo yokubalekela kukuphithizela kwemihla ngemihla. Le ndlu incinci iziva nantoni na ngaphandle kwekhitshi enezinto ezigcweleyo zekhitshi, ibhedi egcweleyo, igumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi egcweleyo, kunye neefestile ezinkulu kuyo yonke indawo.
Ukongeza, uya kuba nokufikelela kwigrill kunye nezitulo ezi-2 ezisongekayo zengca.
I-Tiny Sweet Escape yinto ephuma ngokupheleleyo kwigridi e-White Hills, e-AZ efumaneka kwimizuzu engama-90 ngaphandle kweLas Vegas kunye neeyure ze-3.5 ukusuka ePhoenix. Unokufumana izandi zokuthi cwaka ngorhatya ngalunye xa uphola imini. Ngaphezu koko, uvakalelwa kukuba unokuchukumisa iinkwenkwezi xa ilanga litshona. Akukho nto ifana nayo! Unokufikelela kwiihektare ezili-10 ukujonga izilwanyana, ukuhamba uhambo olude, okanye ukubukela ukuphuma kwelanga. Ipropathi imida iBureau yoLawulo loMhlaba enendawo yokuhlola ngakumbi. Ngeyure, unokuba seHoover Dam okanye kwiGrand Canyon West rim.
Umbuki zindwendwe ngu- Tina And Troy
Siya kufumaneka kuwe ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Kwakhona siya kubonelela ngoqhagamshelwano lwendawo ngubani onokuxhasa kwipropati. Sifuna ukuba ube neyona ndlela ibalaseleyo kunye neyona imangalisayo yokubaleka kumnandi kumnandi!